Mhashu neHuchi - Chokwadi chine mubairo asi hachina mbiri
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mhashu neHuchi - Chokwadi chine mubairo asi hachina mbiri
Mhashu neHuchi - Chokwadi chine mubairo asi hachina mbiri
Johane mubapatidzi akazivisa Jesu Kristu. Johane akakurira murenje Bhaibheri rinoti aidya mhashu nehuchi hwebundo.
Mateo 3:4 Iye Johane aive nenguvo yamakushe ekamera, nebhanhire reganda pachivuno chake; zvekudya zvake zvaive mhashu novuchi bwebundo.
Mhashu dzinofamba dziri zhinji kwazvo dzinoparadza zvose zviri munzira madzo. Izvi zvinomiririra mweya yakaipa.
Johane aiparadza mhashu paaidzidya. Izvi zvaimiririra hushumiri hwaJohane, hwaive hwekumhura vakuru vezvitendero vaipikisa Jesu, Shoko raMwari. Mweya yakaipa ichagara ichipikisa Shoko raMwari. VaPrista vaNyori vaFarise navaSadusi vakaita Mari zhinji kubva muchitendero vakaita zvikwata zvevanhu vakavadzidzisa kuti vamhure Kristu, Shoko. Johane akavatuka, akavadzaidza kuti vana venyoka. Nyoka dzine huturu hwakaipa pasi pendimi dzadzo. Vakuru vezvitendero vaiparidza nhema, kwete Shoko raMwari. Ndangariro netsika dzevanhu dzinotaurwa zvakatsetseka nemiromo yevaparidzi ndizvo muchetura pamweya.
Nguva mbiri dzakatsamwa Jesu zvakanyanya aive atsamwira vaitengesa vachizviitira mari muTemberi. Vaive vashandura chitendero kuita bhizimisi guru. Maprista makuru aigara mumizinda yakanakisa. Nhasi uno vafundisi ndivo vanogara dzimba dzakanakisa.
Mbatya dzaJohane nekudya kwake kwaive kwakareruka kwaisawirirana nechitendero chavo chekubudirira sezvo vaifunga kuti hupfumi ndiko kunamata (1 Timotio 6:5). Nguva hadzina kushanduka. Ndizvo zvazvichiri nanhasi takamirira Kuuya kwaKristu kweChipiri.
Makereke makuru ndiwo mapazi “ebudiriro”.
Johane akazivisawo Jesu, uyo chipiriso chake chaive kunhuwhira kwakanaka kwakaunza ruponeso rwedu.
Izvi zvinomiririrwa nehuchi hunomirira chinhu chakanaka uye chisingashanduki. Ndicho chekudya chega chisingavori. Kune nzira imwechete chete yekuti munhu aponeswe. Kutendeuka patsoka dzemuchinjiko.
Asi tinofanira kurangarira kuti kuti tinoda kuponeswa kuzvinhu zvitatu; gehena, kukun’ora kunounzwa nemifungo yedu, uye nguva yekutambudzika kukuru.
Tinoponeswa kubva kugehena kana tikatendeuka togamuchira Jesu saIshe neMuponesi wedu.
Tinekupupura kwakajeka kwehana dzedu kana tikabhabhatidzwa nenzira yakanaka muzita raShe Jesu Kristu. Izvi zvinoreva kuti hatina kutanga rwendo rwedu rwekuva maKristu nenzira yakaipa. Hatinakunyengerwa tichibva mukuwana ruponeso. Senhengo yemukadzi wake tinenge tatora zita remurume wedu.
Kana tasvika apa tinenge takufanira kufukunura chokwadi cheShoko raMwari kuti tizive kuti kukanganisa kuripo pamaziva ano atinorarama ndekupi (kuita kwemasangano emakereke “hichechi-chechi”) uye kuti tiwane kuti zano raMwari rekupedzesera nderei kuti tigadzirire kusangana naye paKuuya kwake Kwechipiri.
Chimwe chekunyengera kukuru kwanhasi kutenda kuti nekuti takaponeswa kubva kugehena, saka tichaenda kudenga zvakadaro panotorwa vatsvene kunosangana naMwari.
Tinofanira kunamata Mwari muMweya nemuzvokwadi. Saka tese tinofanira kuziva chokwadi. Kusaziva Bhaibheri hakugoni kuita kuti mugadzirire Kuuya kwechipiri.
Tinofanira kuziva chokwadi kuti tisawanikwe tichibatwa nemweya mukuru “wechichechi-chechi” wakavamba masangano anosvika 30 000 akasiyana siyana emakereke (rangariri mhashu dzinofamba muzvikwata) ari kutsvaira vanhu vakaponeswa vachipinda munguva yeKutambudzika kukuru.
Nei Bhaibheri rakataura pamusoro pechikafu chaidyiwa naJohane? Pazvinhu zvese zvinokwanisa kudyiwa nemunhu murenje nei izvi zviviri chete zvakataurwa? Bhaibheri riri kupa nguva yedu yekereke yekupedzisira gwara rakachenjera rezvinhu zvekutarisira Jesu Kristu asati auya Kechipiri kuzotora Mukadzi wake, avo voga vanozvipira kuchera pakadzika kuti vatsvage chokwadi ndivo vachachiwana.
Johane aive munhu wemurenje; akazouya neshoko rekutendeuka kuti vanhu vagadzirire kuuya kwaMesiah. Izvi zvaimumanikidza kwazvo kuti amhure dzidziso zhinji dzenhema, izvi zvaive zvisina mbiri muvakuru vezvitendero.
Mateo 3:1 Namazuva iwayo Johane Mubhabhatidzi akavuya achiparidza parenje reJudea, achiti;
2 Tendevukai nokuti vushe bwekudenga bwaswedera pedyo.
3 Nokuti uyu ndiwakarebwa nomuporofita Isaya, achiti: Inzwi rounodana murenje: gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake.
Mharidzo yaJohane yaive yakajeka uyu aive nechinangwa chakajeka. Aive asinganzvengi kana kuvanda kana asvika pakudzidzisa Bhaibheri izvi zvakaita kuti avengwe nevaPrista, vaNyori, vaFarise navaSadusi vaive vakuru vechitendero.
Mateo 3:7 Asi wakati achivona vazhinji vavaFarise navaSadusi vachivuya kuzobhapatidzwa, akati kwavari: Vana venyoka, ndiyaniko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
8 Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka.
Saka chii chatinodzidza kubva pane izvi uye izvi zvingayanane papi nechikafu chaidyiwa naJohane?
Let us look at “honey” in the Bible. Ngatitarisei “huchi” muBhaibheri.
Chinhu chekutanga pachikafu chaJohane hwaive huchi, asi kwete huchivo zvahwo, Bhaibheri rakajekesa kuti huchi hwebundo.
Izvi zvinoreva kuti huchi husina kubvira hwagadzirwa nenzira dzevanhu. Hapana kana kushanda mifungo yevanhu pakuhuita. Hapana tsika dzevanhu.
Huchi hwakataurwa muBhaibheri rese tinogona kuwana zvahunoreva kana tikaramba tichitevera Magwaro.
Kuna Eksodo, huchi mubairo munyika yechipikirwa:
Eksodo 3:17 Ndikati ndichakubuditsai pakunetswa kwenyu paEgipita, ndimuise panyika yavaKanani, neyavaHeti, neyavaAmori, neyavaPerezi, neyavaHivi, neyavaJebusi, kunyika inoyerera mukaka novuchi.
Mubhuku raSamueri huchi hunotaura kusvinudzwa kana zaruriro:
1 Samueri 14:25 Zvino vanhu vose vakasvika padondo, vakawana vuchi bwuri’po pasi.
26 Vanhu vakati vasvika padondo vakawana vuchi bwoyerera pasi, asi hakunomunhu wakaisa ruvoko rwake mumuromo wake, nokuti vanhu vakatya kupika kwaSauro.
27 Asi Jonatani wakanga asina kunzwa baba vake vachiraira vanhu nokupika kwavo; naizvozvo akatambanudza muromo wetsvimbo yake, yakanga iri muruvoko rwake, akainyika muzinga rovuchi, akaisa ruvoko rwake kumuromo wake, meso ake akasvinudzwa.
Nokuti Jonatani akasvinudzwa nehuchi akakwanisa kuziva kuti vokunda sei vaFirisitia, nekuunza ruponeso kuIsraeri. Saka tarirai kuti huchi hwakayanana sei neruponeso rwaJonatanni zvese neIsraeri. Jonatani akapikisa zvaitendwa nevamwe vanhu vose. Izvi zvakaponesa hupenyu hwake pamapeto, uye neIsraeri iri yose, sezvo Sauro aida kumuuraya nekusateerera murairo wenhema.
Makazvipira here kupikisa dzidziso dzekereke yenyu kana sangano renyu?
1Samueri 14:44 Sauro akati: Mwari ngaandirove, arambe achidaro, nokuti zvirokwazvo unofanira kufa, Jonatani.
45 Zvino vanhu vakati kuna Sauro: Jonatani ungafa seiko, iye wakaponesa vaIsraeri nokuponesa kukuru uku? Haisa! NaJEHOVA mupenyu, ruvhudzi rumwe rwemusoro wake harungawire pasi, nokuti wakabata pamwechete naMwari nhasi. Naizvozvo vanhu vakadzikinura Jonatani, akasafa.
Sauro anomiririra kuita kwechitendero kwehudzvanyiriri kana masangano enguva yedu anoita kuti kusvinudzwa kana zaruriro yechokwadi zvisasvike kuvanhu vodzivisa kukunda kukuru pamusoro pezvakaipa.
Zvakaipa zvinotibira mubairo wedu mukuru uri kugadzirwa paKuuya kwechipiri kwaJesu Kristu.
Zvakare kuna Mapisarema, huchi hunoonekwa nemubairo wekunzwisisa Shoko raMwari kwakakosha kukunda ndarama yakanatswa.
Mapisarema 19:9 Kutya Jehova kwakanaka kunogara nokusingaperi:Zvakatongwa naJehova ndezvazvokwadi, zvakarurama kwazvo.
10 Zvinofanira kutsvakwa kukunda ndarama, zvirokwazvo kukunda ndarama zhinji yakaisvonaka; zvinotapiravo kupfuvura vuchi nomusi wamazinga ovuchi.
11 Vuye zve, muranda wenyu unoyeverwa nazvo; Pakuzvichengeta panomubairo mukuru.
Kumberi kunaMapisarema kunotaura kuti huchi ndicho chikafu chemubairo unobva kuna Mwari kana vanhu vakateerera Shoko rake vakarichengeta pachinzvimbo chekutevera zvido zvevanhu. Ndiko kudya kunogutsa vanhu vaMwari panzara yavo.
Mapisarema 81:10 Ndini JEHOVA Mwari wako: wakakubudisa panyika yeEgipita: Shamisa muromo wako kwazvo ndigouzadza.
11 Asi vanhu vangu havana kuteerera inzwi rangu: Israeri wakandiramba chose.
12 Saka ndakavaregera pavukukutu bwemoyo yavo; kuti vafambe nemano avo.
13 Haiwa, dai vanhu vangu vainditeerera havo, dai Isreri aifamba nenzira dzangu!
14 Ndingadai ndakakurumidza kukunda vavengi vavo, Nokurova vadzivisi vavo noruvoko rwangu.
15 Vanovenga JEHOVA vaizviisa pasi pake; Asi nguva yavo yaiva’po nokusingaperi.
16 Ungadai aivadyisavo zviyo zvakaisvo’naka; Ndaikugutsa novuchi vunobva padombo.
MuTestamente Itsva Mwari akavimbisa kugutsa nzara yedu.
Ruka 6:21 Makaropafadzwa imi mune nzara zvino, nokuti muchagutswa; makaropafadzwa imi munochema zvino, nokuti muchaseka.
Kana tikaita nzara yechokwadi tikachitsvaga muShoko raMwari, akavimbisa kuti achatipa zaruriro yakakwana, huchenjeri uye kunzwisisa muShoko rake. Izvi zvinotipa vuhse nesimba rekukunda muvengi.
Zvirevo 24:13 Mwanakomana wangu, idya vuchi nokuti bwakanaka; nomusi, unozipa pamukanwa wako.
14 Uchavona kuti ndizvo zvichaita vuchenjeri kumweya wako: kanawavuwana, mubairo uchavapo, nezvawakatarira hazvingaparadzwi.
Zvakare kuna Isaya kudya vuchi kunoratidza kuti kunopa huchenjeri hwekusarudza nzira yakanaka.
Isaya 7:15 Uchadya ruvomba novuchi, panguva yaanoziva kuramba zvakaipa nokusanangura zvakanaka.
Zvakakosha kunzwisisa micherechedzo yehuchi kuitira kuti tigogona kuona nekuziva zvakanaka patinosvika kuBhuku rechiporofita raZvakazarurwa kunotaurwa pamusoro pehuchi. Mwari anotarisira kuti tizive Bhaibheri nezvinoreva micherechedzo irimo yese kuti tigogona kuturikira zviporofita zvake zvakanaka:
Zvakazarurwa 10:9 Ndikaenda kumutumwa, ndikati kwaari; Ndipei bhuku duku. Iye akati kwandiri: Tora uidye; ichavavisa mudumbu mako, asi mumuromo mako ichanaka sovuchi.
10 Ipapo ndakatora bhuku duku muruvoko rwomutumwa, ndikaidya; ikanaka mumuromo mangu sovuchi; asi ndakati ndaidya, mudumbu mangu mukavaviswa.
Zvichibva pane zvatadzidza takuziva kuti bhuku duku yakadyiwa naJohane rinofanira kuva raive Shoko raMwari (Bhaibheri) nekuti kubva kwariri rega tinowana kunzwisisa kwakanaka nezaruriro yekuti Jesu Kristu ndiyani, uye kuti achakunda sei Satani nemweya yake yese yakaipa. Mubairo ndihwo hupenyu husingagumi uye kupunyuka kubva panguva yeKutambudzika kukuru, asi zvinouya nemuripo unovava wekushaiwa mbiri pakati pevazhinji- kunyangwe nevamwe mukati mechitendero. Chingave chii chakaipa kana chakaoma chatinosangana nacho nekuda kwechokwadi, Mwari anotinunura neimwe nzira uye chapupu chekununurwa kwedu chinobuda nemashoko akanaka mumuromo medu. Tinofanira kudzeya zviitiko zvakaoma izvi zvose todzidza kubva kwazviri sezvo hunhu hwedu hunorodzwa nekurwadziwa pakubuda kwekukundwa uye kuomerwa. Tinofanira kupoteredzwa nerima tisati taona nyeredzi.
Sezvo Johane mubapatidzi akazivisa Jesu ari nehushumiri hwakaita sehwaEria, Bhaibheri rinoprofita kuti kuchavazve neumwe mushumiri anobata saEria kukwira kudenga kwekereke kusati kwaitika.
Mateo 17:10 Vadzidzi vakamubvunza, vachiti: Vanyori vanotaurireiko vachiti; Eria unofanira kutanga kuuya?
11 Akapindura Akati: Eria uchavuya hake avandudze zvinhu zvose.
12 Asi ndinoti kwamuri: Eria wakatosvika asi havana kumuziva; asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo vo Mwanakomana womunhu uchabva watambudzwa navo.
13 Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti wakavavudza zvaJohane Mubhabhatidzi.
Jesu akati Eria anofanira kutanga kuuya (asati Auya keChipiri kuti asangane nemudzimai wake mumakore aende naye kudenga) asi aive atouya kare saJohane Mubhabhatidzi. Saka tinofanira kutarisira mharidzo yakafanana naiyoyo pakupedzisira. Hushumiri huchaunza kunzwisisa uye kuzarurwa kweShoko raMwari, asiwo mharidzo isina mbiri mumasangano emakereke anhasi.
Ndapota tarisai. Vadzidzi vaive vapesana zvakazara nehushumiri hwaJohane mubapatidzi. Vaive vakazadzwa kwazvo nekuita kuda kwavo kwemazuva ose nemabasa ezvechitendero zvekuti vakatadza kuona chinhu chikuru muHurongwa Hukuru hwaMwari. Vaizviti maJuda echitendero asi havana kuona kuti Mwari aive aitei munguva yavo. Nhasi uno maKristu ane dambudziko rimwechete iri. Tinozviti maKristu akanaka nekuda kwekuenda kwatinoita kukereke nekuita zvinodiwako asi tisina kana fungidziro yezviri kuitwa naMwari muHurongwa hwake hukuru. Nhasi kune marudzi akasiyana emasangano anosvika 30 000. Sangano rega rega rinenge riri nemapoka zana kana chiuru pacharo. Ese masangano aya anoti anonatsa asi achiita zvakasiyana. Baberi rekukanganisika iri rinoyanana nemazano netsika dzinorasika dzakawandisa, sevadzidzi, tinokwanisawo zvakanyanya kurasikirwa nenhanho yaMwari yekupedzisira. Masangano ese emakereke aya ane chinhu chimwechete chaakafanana. Vese havana chavanoda kubva kunze vane zvakavakwanira, vanoti vane chokwadi chese, uye havade chiro vanofunga kuti havade kugadziriswa kana mazano kubva kumunhu asiri wemusangano ravo. Vakatarisa kuwanda kunoita vanhu musangano ravo vanobva vafunga kuti saka vari kugona.
Huchi ndicho chikafu chimwechete chisingavori. Saka Shoko raMwari harishanduki kana kuvora.
Richiri nhasi sezvaraive makore zviuru zviviri zvakadarika. St Pauro nemamwe mapostora vaive vasina kupfuma. Kwaive kusina makereke makurusa muTestamente Itsva. Izwi rekuti “mufundisi” (pasita) rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva. Hapana muTestamente Itsva pakanzi mufudzi (shepherd) ndiye mufundisi. Tinofanira kudzokera pakuita kwakareruka kweTestamente Itsva.
MuMagwaro mese mhashu dzinoyananiswa nehosha. Mwari akatumira hosha yemhashu paEgipita:
Eksodo 10:12 Zvino JEHOVA akati kuna Mosesi, tambanudza ruvoko rwako pamusoro penyika yeEgipita, mhashu dzivuye pamusoro penyika yeEgipita, dzidye miti yose yenyika yose yakanga yasiiwa nechimvuramabwe.
Mhashu mucherechedzo wemazano kana dzidziso dzevazhinji. Dzidziso idzi dzinopararira sehosha. Hadzidi munhu mumwe anotungamira. Dzinokura apo dzinozadzisa zvido zvevazhinji. Mhashu dzinomiririra mweya yakaipa dzakafanana nevaparadzi kana magandanga. Munogona kuuraya mutungamiri akaita saSaddam Hussein, asi kuita kwemagandanga hakuna basa nemutungamiri. Kunoshanda neruvengo nerudo rwekuuraya kuitira kuti vaite simba. Vamwe vanoramba vachiuraya asipo.
Zvirevo 30:27 Mhashu hadzina mambo; kunyange zvakadaro dzinofamba zvakanaka dzichiita mapoka.
Nahumi 3:15 Moto uchakupedzai’po, munondo uchakuparadza, uchakupedza segwatakwata; zviitei vazhinji segwatakwata, zviitei vazhinji semhashu.
16 Makawanza vatengesi venyu vakapfuvura nyeredzi dzokudenga; gwatakwata rinoparadza, ndokuburuka richienda.
17 Machinda enyu akaita semhashu, vakuru venyu semhashu zhinji-zhinji, dzinovata pazhowa kana kunechando, asi kana zuva rabuda dzonoburuka dzichienda, hadzichazivikanwi kwadzavari.
Magamba evanhu akaita mazano ane mbiri, vangave vafundisi kana vatungamiri mumakereke avo, vatungamiri munezvematongerwo enyika, vatambi vezvemafirimu, kana vaimbi vane mbiri. Vose ava vari “vatungamiri” vevazhinji vanoparidza zvinhu zvisiri muMagwaro zvakafanana nekutendera kuroorana kwevarume nevarume kana vakadzi nevakadzi, kubvisa mimba, kushanduka kwevanhu kubva kumhuka nezvimwe zvakadaro. Mazano aya nekumwe kutenda kwenhema kuchaendesa vazhinji kunguva yeKutambudzika kukuru, zvichavasvitsa parufu rwavo.
Jesu Kristu anopenya sezuva uye chiedza chechokwadi chake kupfurikidza Bhaibheri. Chiedza ichi chinoratidza chokwadi chatinofanira kuziva kuti tinzvenge nguva yeKutambudzika kukuru towana hupenyu husingagumi. Chinozivisawo kuti zvinotendwa neruzhinji manyepo, zvinodzivisa gadziriro yekukwira kudenga paKuuya kwaShe kwechipiri. Nechiedza ichi chichipenya mhashu hadzina imwe sarudzo asi kubhururuka dzichienda. Havagoni kutevera nekutsigira zvavanotenda kupfurikidza Magwaro.
Mhashu dzinoparadza chokwadi:
Joeri 1:4 Zvakasiiwa nomuteteni, zvakadyiwa nemhashu; zvakasiiwa nemhashu, zvakadyiwa negwatakwata; zvakasiiwa negwatakwata, zvakadyiwa nomupedza chose.
Vanhu pavanotanga zvishoma nezvishoma kugamuchira zvinhu zvemunyika nemazano mazhinji emasangano, vanoramba Bhaibheri. Vanoverenga Magwaro mashoma, kunzwisisa kwavo kunopupuruka kuchienda, mumashure mezera rimwechete, chokwadi chinenge chadzima zvachose kunzwisisa kana zvaireva Magwaro pekutanga zvinenge zvarasika kana kuti zvatsiviwa nezvinhu zvenyika ino.
Asi kune vimbiso yekuti chokwadi chichadzoserwa munguva yekereke yekupedzisira.
Joere 2:25 Ndichakudzoserai zve makore amakadyirwa nemhashu, negwatakwata, nomupedzachose, nomuteteni, iyo hondo yangu huru yandakatuma pakati penyu.
Hushumiri hwaJohane Mubhabhatidzi hwaive hwakafanana nehwaEria. Asi Johane haana kudzosera chiro. Kuzadziswa kwechiporofita chake kwaingove gadziriro yechiporofita ichi.
Johane 1:22 Zvino vakati kwaari: Ndiwe aniko? Tigondopindura vakatituma. Unozviti aniko?
23 Akati: Ndini inzwi rounodana murenje, richiti; Ruramisai nzira yaShe; sezvakarebwa nomuporofita Isaya.
24 Ava vakanga vatumwa vaiva vaFarise.
Tamboverenga kuna Mateo 17 kuti Eria anofanira kuvandudza:
Mateo 17:11 Akapindura akati; Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Saka chiporofita ichi chinoda kuzadziswa neumwe Eria asiri Johane Mubhabhatidzi. Chiporofita chiri kuna Maraki chinoti Eria anofanira kuuya zuva guru raJehova risati rasvika.
Maraki 4:5 Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJehova, rinotyisa, risati rasvika.
Naizvozvo, Eria anofanira kuuya panguva yekupedzisira uye hushumiri hwake hunofanira kuvandudza chokwadi chose chakadyiwa nemhashu. Eria weTestamente Yekare akaita hushumiri hwakaita sewaJohane Mubhabhatidzi. Vaive nekufanana kuzhinji mavari, vose vaive vanhu vanogara murenje vose vaiparidza vachipikisa kuita kwehutungamiri mazuva avo. Vose Eria weTestamente Yekare naJohane Mubhabhatidzi vaive nehushumiri huchafanana nehwaEria achauya panguva yekupedzisira vatsvene vasati vatorwa kukwira kudenga. Sezvazvaive naJohane Mubhabhatidzi, Eria wenguva yekupedzisira achadya mhashu (achaparidza zvinhu zvisina mbiri) nehuchi hwebundo (Mwari achamushandisa kuzivisa chokwadi chaive chakavanzwa mukati menguva dzose dzemakereke kuti isu tigadzirire Kuuya kwaShe kweChipiri).
Zvakare kana tikasvika kubhuku raZvakazarurwa tinonzwisisa mucherechedzo wemhashu:
Zvakazarurwa 9:3 Muvutsi makabuda mhashu (mweya yetsvina muchitendero neruvengo rwacho pamusoro paIsraeri, uye kusada kwavo kushandisa Magwaro akanyorwa kutsigira zvitendero zvacho uye mazano nedzidziso dzinorasisa ruzhinji) dzikavuya panyika: dzikapiwa simba sesimba rezvinyavada (zvinoruma nekurwadzisa) zvenyika.
Chivutsi chinovanza chiedza chezuva. Masangano anoshadura mashoko akanyorwa muBhaibheri odzidzisa zvinhu zvisimo muBhaibheri zvakafanana nekuti Tiriniti. Saka chiedza cheShoko raMwari chinodzikatirwa.
Zvavanotenda zvinobuda kubva mugomba rakadzika dzika risina nheyo dzeBhaibheri.
Kuruma kwezvinyavada kunorwadza kwazvo ndiro simba razvo rekunyengera nyika kuti itende kuti vanotevera Magwaro asi ivo vachishandisa zvinhu zvisimo muMagwaro zvakaita seTiriniti, mumwe- muvatatu, vatatu- mumwe, munhu wechipiri mukuzara kwehuMwari, uye kutaura kuti mazita ezvinzvimbo matatu Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene izita. MaKristu anhasi vachamutswa mukurwadziswa kwenguva yekutambudzika kukuru vozoziva kuti vakuru vavo vezvitendero vakavarasisa, sezvazvakamboita muimba yekutongwa yaPirato.
Zvakazarurwa 9:4 Dzikavudzwa kuti dzirege kutadzira vuswa bwenyika, nechinhu chinyoro, kana miti yose (Mhashu idzi hadzidyi chikafu sezvinoita mhashu dzatinoziva nekuti idzo mweya yakaipa. Simba radzo rekuparadza vanhu nekuvapinza muzvivi ndizvo zvakaita kuti Johane afananidze mweya yakaipa iyi nemhashu dzinoparadza. Vanhu vanotenda kuchokwadi havatadziswi nadzo kana kutya huwandu hwadzo. Nekuti ivo vanoshandiswa neMweya Mutsvene); asi vanhu chete vasinechisimbiso chaMwari pahuma dzavo. (Pahuma dzenyu ndipo pane njere, ndipo pane pfungwa dzenyu. Avo voga vasingateveri hutungamiri hweMweya Mutsvene paunotungamira vanhu muzaruriro yeMagwaro, ndivo vachabatwa mumisungo vopedzisira vamunguva yekutambudzika kukuru.)
Zvakazarurwa 9:5 Hadzina kupiwa basa rokuvavuraya (Mweya wetsvina haukwanisi kukuuraya. Ndipo panotanga nguva yeKutambudzika) asi kuti varwadziswe mwedzi mishanu; kurwadzisa kwazvo kwakanga kwakaita sekurwadzisa kwechinyavada, kana chichiruma munhu. (Chingofungai kurwadziwa kwemaKristu akaponeswa vanopatika vaziva kuti vakuru vemakereke avo vakavanyengera uye kuti ivo nemhuri dzavo vakutonofa munguva inotyisa kwazvo yeKutambudzika kukuru).
Zvakazarurwa 9:6 Namazuva iwayo vanhu vachatsvaka rufu, asi havangatongoruwane, vachavinga kufa, asi rufu ruchavatiza.
Vazhinji vevaKristu vakaponeswa munguva yeKutambudzika vachadzidza chokwadi kubva kuna Mosesi naEria, maporofita maviri emaJuda. Vachaimba rwiyo rweGwaiana Ishe Mwari Wokubwinya uye iye oga ndiye Mutsvene. Hakuna nzvimbo ikoko yevamwe Vanhu vaviri vanoiswa pakuzara kwehuMwari.
Zvakazarurwa 9:7 Pakuvonekwa kwadzo mhashu dzakanga dzakaita samabhiza (Mabhiza anomiririra simba remisikidzo dzakaitwa nevanhu dzakakudza mazano nedzidziso) akagadzirirwa kurwa; pamisoro yadzo pakanga panezvimwe zvakaita sekorona dzakafanana nendarama, (mhashu kana mweya yakaipa ndiwo madzimambo akagadzwa nevanhu. Vanhu vanozomuka vachiona kuti vatungamiri vavo vechitendero uye zvematongerwo enyika- vaitungamirirwa nemweya werima wetsvina) zviso zvadzo zvakanga zvakaita sezviso zvavanhu (misikidzo dzakaitwa nevanhu dzinotungamirirwa nevanhu)
Zvakazarurwa 9:8 Dzakanga dzinebvudzi rakaita sebvudzi ravakadzi (mukadzi anomiririra kereke misikidzo dzemazano evanhu dziri mukereke) nameno adzo akanga akaita seeshumba (kuruma nekuparadza).
Zvakazarurwa 9:9 Dzakanga dzinezvidzitiro zvezvipfuva zvakaita sezvamatare (dare rinomiririra hudzvanyiriri kana hutsinye hwehushe hweRoma yekare huchasimuka zvakare kuzoita chokwadi chekuti vanhu vari kuteerera nekuita zvinodiwa mukereke); nokutinhira kwamapapiro adzo kwakaita sokutinhira kwengoro (imisikidzo yakasimba yakapararira nepasi rese) dzamabhiza ari kumhanyira kuhondo.
Zvakazarurwa 9:10 Dzakanga dzinemiswe yakaita seyezvinyavada, novumborera; pamiswe yadzo pakanga pane simba rokukuvadza vanhu mwedzi mishanu.
“Miswe” (tail) muchiratidzo zvinomiririra “nyaya” kana ngano yavanotaura. Vumborera munyaya yavo unoreva kuti vanokuita kuti utende muzvinhu zvakaipa. Muchazvidairira kana mafa.
“Rufe, vumborera bwako bwuripiko?”.
Vumborera rwerufu zvivi. Chivi ndiko kusatenda. Kutenda mune chimwe chinhu chakasiyana nezvakanyorwa muShoko.
Zvakazarurwa 9:11 Dzakanga dzina mambo wadzo (pakupedzisira zvinoziviswa kuti mazano nedzidziso idzi dzose dzaive netsime radzo rinova Satani, asi nguva ndiyo inenge isisipo. Mambo anopfeka korona. Pope Nicholas 1 ndiye Pope wekutanga kupfeka korona muna 860 AD. Kaive kekutanga kuti mukuru wekereke kumadokero apfeke korona. Izvi zvakazokura kuita korona ine zvidanho zvitatu inopfekwa naPope kubva kumakore akatenderedza 13 00.) ari mutumwa (kana nhume) wegomba rakadzika-dzika; (iri harina nheyo dzeBhaibheri) zita rake nechiHeberu ndiAbadoni, nechiGiriki ndiAporioni. (Mazwi aya anoreva kuti muparadzi, vakaparadza chokwadi.)
Kana tikatenda kuchokwadi tikachitevera, tichapunyuka nguva yehosha dzinotyisa dzemweya yetsvina totorwawo pakukwira kudenga nguva yeKutambudzika isati yatanga. Ishe Jesu Kristu akatumira hushumiri hwechiporofita sezvakavimbiswa mumunhu William Branham kuti azivise chokwadi chizhinji cheMagwaro uye chokwadi chakarasika nguva yerima. Dzidziso dzekuzara kwehuMwari, chivi chekutanga, rubhapatidzo rwemvura, Zvisimbiso zvinomwe nedzimwe dzidziso sedzekuti hakuna kuwanikwa kana kuwanazve mumashure mekurambana (nekuti sungano yewanano inonzi kusvikira vaparadzaniswa nerufu) dzichange dzisina mbiri pakati pevanhu. Asi dzakakosha uye dzinokwanisa kutsigirwa neMagwaro uye kupfurikidza nekudzidza kwakadzama nekunamata zvakanaka sehuchi hwebundo kana zvaziviswa kwatiri neMweya Mutsvene.
Zvakazarurwa Chitsauko 9 chinozivisa vanehuwori vapararira vakapamba kereke yechiKristu.
Nyeredzi inodonha kubva kudenga ichave mucherechedzo wemweya wetsvina kana wakaipa waimbove kudenga semutumwa, kusvikira warwisa Mwari ukatukwa ukashanduka kuita mweya wetsvina. Basa rawo nhasi uno nderekuburitsa mweya yese yetsvina iri mugomba regehena obva aregedzera simba regehena pamukadzi waKristu nekutanga atora hutungamiri hwemakereke emasangano. Maziso evanhu akapofomadzwa nechiutsi chemazano netsika, saka mukushaikwa kwechiedza cheMagwaro vakuru vemakereke vanokwanisa kukudza kusaziva nekutadza. Mukukanganisika kwezviitiko nezvinhu zvinoita sezvakavanda, kuipa kunokura apo mapoka emweya yetsvina (mhashu) anodururwa kubva mugomba kuti maKristu arambe akarara mukusaziva muhutefetefe whemakereke avo. Vakaponeswa, asi vakazadzwa nemazano akangwara asingawanikwi kana kutsigirwa neBhaibheri, maKristu anhasi akamirirwa nenguva yeKutambudzika kukuru. Vasikana vanegumi (kereke yakachena) vakarara. Vashanu vane mafuta ekutungidza mwenje yavo. Asi chiedza chemwenje chiri kufanira kuvabatsira kuti vaone chimwe chinhu. Kuti vaone Shoko raMwari rakanyorwa uye kuti vazive zvarinoreva.
Ruka 18:8 ... Asi Mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Varoma 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunza, nokunzwa kunovuya neshoko raMwari.
Izvi hazvinzwiki sekuti vanhu vazhinji vari kuteerera uye kunzwisisa Shoko raMwari rakanyorwa.